﻿Download Isixhobo Sokuhlola seMicrosoft Office 2013 - Xhosa from Official Microsoft Download Center
HausaIgboIkinyarwandaIsi-AfrikansiIsi-AlbhaniyaIsi-ArabhuIsi-ArmeniyaIsi-AssameseIsiAyisilendaIsi-Azeri (Latini)IsiBaskhaIsiBengali (Indiya)IsiBhelgariyaIsiBhengali (Bangladesh)IsiBhosniya (Latini)IsiDanishiIsiDatshiIsiEstoniyaIsiFarsiIsiFinnishIsiFrentshiIsiGalishiyaIsiGrikeIsiGujaratiIsiHangariIsiHebhereIsiHinduIsi-IndoneshiyaIsiJamaniIsiJaphanIsiJojiyaIsiKannadaIsiKazakhIsiKhatalaniIsiKonkani IsiKoriyaIsiKroweshiyaIsiKyrgyzIsiLatviyaIsiLithuwaniyaIsiMalayalamIsiMalayi (saseBrunei Darussalam)IsiMalayi (saseMalaysia)IsiMaltaIsiMāoriIsiMarathiIsiMasedoniya (saseFYROM)IsiNgesiIsiNorwejiyeni (isiBokmal) saseNorwayIsiNorwejiyeni (isiNynorsk) saseNorwayIsi-OriyaIsiPanishiIsiPashtoIsiPediIsiPholishiIsiPhuthukezi (saseBrazili)IsiPhuthukezi (sasePortugal)IsiPunjabiIsiRashiyaIsiRomaniyaIsiRomanshIsiSebhiya (iLatini)IsiSebhiya (isiSirilikhi)IsiSinhalaIsiSlovakhiIsiSlovaniyaIsiSwidishiIsiTaliyanaIsiTatarIsiTeluguIsiThamiliIsiThayiIsiThekishiisiTshayina (esiLula)isiTshayina (seMveli)IsiTshekhIsi-Uzbek (iLatini)IsiVietnamIsiWelshiIsiWolofIsiXhosaIsiYorubaIsiYukreniyaIsiZuluKiswahiliLëtzebuergeschNepaliScottish Gaelic - United KingdomSerbian (Cyrillic) - Bosnia and HerzegovinaSetswana (Aforika Borwa)umAyirishiUrdu - Pakistan
Ngaba ufuna ukuhlola upelo kulwimi olungafakelwanga ngokuzenzekelayo yi-Office? Ukwindawo efanelekileyo. IZixhobo Zokuhlola ZeMicrosoft Office ziquka iseti epheleleyo yezixhobo ezifumanekayo kwiOfisi ngolu lwimi. Fakela nje uze uphinde uqale iOffice, kwaye uzixhobo zolo lwimi ziya kufumaneka.
Olu khuphelo lusebenza kunye nolu setyenziso lulandelayo:
Ukufakela olu kuphelo:
Ukufakela izixhobo zokuhlola:
Khuphela ifayile ngokucinezela iqhosha lokuKhuphela (ngaphezulu) kwaye ugcine iifayile kwihadi diski.
Sebenzisa isetapu yosetyenziso.
Xa ufunda kwipheha Lemiqathango YeLayisensi KwiSoftwe YeMicrosoft, hlola imiqathango, "Cinezela apha ukuze wamkele Imiqathango YeLayisensi KwiSoftwe YeMicrosoft" ngokukhetha ibhokisi yokuphawula, uze ucinezele Qhubeka.
Iwizathi yokuqhubeka ihamba ize ifake izixhobo zokuhlola.
Emva kokuba ukufakelwa kugqityiwe, qala phantsi usetyenziso lwee-Office.
Imiyalelo emele isetyenziswe: Sebenzisa nje izixhobo zokuhlola njengesiqhelo - umele ngoku izibone ngokolwimi lwakho olutsha olufakiweyo. Ngokomzekelo, unokumisela ulwimi lokuhlola ngokolwimi olutsha ukuze lusebenzise ukuhlola ukupela (ukuba luyafumaneka) - ukuze ufunde indlela yokwenza oku, khangela Tshintsha phakathi kweelwimi ngokiuseta ukuhlolwa kolwimi
Ukushenxisa oku kukhuphela:
Kwimenyu yokuqala, khomba kwiiSethingi uze ucinezele iPhaneli Yolawulo.
Cinezela kabini Yongeza/Shenxisa Iiprogramu.
Kuludwe lweeprogramu ezifakiweyo, khetha Izixhobo Zokuhlola ZeMicrosoft Office 2013 Xhosa uze ucinezele Khupha, Shenxisa, okanye Yongeza/Shenxisa. Ukuba ibhokisi yedayalogi iyabonakala, landela imiyalelo yokushenxisa iprogramu.
Cinezela Ewe okanye KULUNGILE ukuqinisekisa ukuba wena ufuna ukushenxisa iprogramu.
Ukuhlola izixhobo zePakethi Yolwimi KwiOffice: uthelekiso